မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: March 2009
တစ်ရံရောအခါ ဘုရင်မင်းကြီးတစ်ပါးရှိလေသည်…။ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ သြဇာအာဏာကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားများနှင့် ..မှူးကြီးမတ်ရာ..များသည်..ချစ်ကြောက် ရိုသေကြသည်..။ဘုရင် မင်းမြတ်၏.. ကျေးဇူးကြောင့် ..တိုင်းသူပြည်သားများမှာချမ်းသာကြွယ်ဝကာ..အေးချမ်းသာယာစွာ..နေထိုင်နိုင်ကြသည်..။စည်းလုံးညီညွတ်မှုကြောင့်…ပြိုင်ဘက်ကင်းသောတိုင်းပြည်အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်..။သို့ သော်လည်း ဘုရင်မင်းမြတ် သည်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာသောက တစ်ခုရှိလေသည်..။ထိုသောက မှာ ညအချိန် ဘုရင်မင်းကြီးဆက်တော်ခေါ်(အိပ်စက်)..ချိန်တွင် ဖားငယ်တစ်ကောင် သည် နေ့ စဉ် လာရောက် ကာ မင်းကြီး၏ မျက်နှာတော်အား သေးဖြင့် ပန်းလေသည်…။မင်းကြီးသည် သတ္တဝါ အပေါင်းတို့ အား သနားကြင်နာတော် မှုသောမင်းတစ်ပါးဖြစ်သောကြောင့် ခွင့်လွှတ်ကာသီးခံ တော်မှုခဲ့သည်…။မှူးကြီးမတ်ရာများသည် သူတို့ ၏ ဘုရင်မင်းမြတ် အားတိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်၏ စော်ကားမှုအား မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကာ… “အို…အရှင်မင်းကြီး..အရှင့်၏ စစ်သည်တော်များ မှူးမတ်များနှင့် တိုင်းသူ ပြည်သား လူမမည်ကလေးများသည်ပါမကျန်..အားလုံးတို့ သည်..အရှင့်အား ရိုင်းပျသည့် မှုအရာဖြင့် ဆက်ဆံသမှု ပြုသောသူတို့ ၏ တိုင်းပြည်များအား ပစ်ဒဏ်ပေး ကာ အထက်အောက်လှန်ပစ်ရန်ပင် အသင့်ရှိပါသည်..ထို့ အတွက်ကြောင့်..မည်သည့် တိုင်းပြည်ကမျှ အရှင့် မျက်နှာတော်ကို ပင် မော်မကြည့်ဝံ့ပါ…ယခုအရှင့်အားစော်ကားသူမှာ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ဖြစ်ချေ သည်။ထို့ ကြောင့် အရှင့် စစ်သည်တော်များနှင့် တိုင်းသူပြည်သားများမှာ ဒေါသအမျက် လျှမ်လျှမ်းတောက်ကာ ထို ဖားသတ္တဝါ ၏ မျိုးရိုးဗီဇအား ကမ္ဘာမြေမှပင် တိန်ကောပျောက်ကွယ်စေရမည်ဟု ကြုံးဝါးနေကြပါသည်..သို့ ပေမဲ့ အရှင့်အမိန့် မရှိပဲ မပြုဝံ့ကြပါ..။အရှင့်ဆန္ဒအား..သိလိုပါသည်”ဟုလျှောက်တင်ကြသည်..။ဘုရင်မြင်းမြတ်မှ“အို…ကျွန်ုပ် ၏ မှူးကြီး မတ်ရာတို့သီးခံကြလော့…ထို ဖားငယ်မှာခိုင်လုံသော အကြောင်းကိစ္စ ရှိသောကြောင့် သာ ထို သို့ ပြုဝံ့ သည်ဖြစ်ပေမည် ……။ထို့ ကြောင့်အသင်တို့ သည် အကျိုးအကြောင်းအားစုံ စမ်းကာ ငါအရှင်မင်းမြတ်အား ဆီလျှော်အောင် လျှောက်တင်ကြရန်” မိန့် တော်မှု လိုက်လေ သည်။ ဘုရင့်အမိန့် ဖြင့် မှူးမတ်တို့ သည် ဖားငယ် ၏ နောက် သို့ လိုက်ကာ ထောက်လှန်းလေသည်။ အကြောင်းစုံ သိရှိရပြီးနောက် နောက်တစ်နေ့ညီလာခံတွင် တင်လျှောက် ကြလေသည်။ “အရှင်မင်းမြတ် ဖားငယ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်းကြောင့် သာထို သို့ပြုကျင့်ခြင်း ဖြစ်သည်..။မည်သို့ သော…ပိုင်ဆိုင် မှုနည်း…???? ဖားငယ်နေထိုင်သော တွင်း အတွင်းတွင် ဘုရင့် ဘန္ဏာတိုက်မှရွှေဒင်္ဂါးပြားတစ်ပြားအား တွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ ထို ဖားငယ်သည် ထို ရွှေဒင်္ဂါးအား ဖင်ခုထိုင်ရခြင်းကြောင့် ဖင်ကျိန်းသည် ဖြစ်ရာအရှင့် မျက်နှာတော်အား သေးဖြင့်ပန်းခြင်းဖြစ်ပေသည်။” ထို မှ ဘုရင်မင်းမြတ်သည်လည်း “အော်တိရစာန်တစ်ကောင်ဖြစ် သော ကြောင့် သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသာ သိကာ ထိုစည်းစိမ်၏ လာရာလမ်းကို မသိချေတစ်ကား….ထို့ ကြောင့်သာလျှင် စည်းစိမ် ရှင်အပေါင်းတို့ ၏ ဘုရင် ငါဘုရင်မင်းမြတ် ကိုပင် မကြောက်မရွှံ ဘုရင်ဆို သည်ကိုပင် မေ့လျော့ကာ အံတု လိုခြင်းပင်ဖြစ်ပေ သည်…. အသင်တို့ သည်လည်းဖားငယ်အား စံနမှုနာထားကာ ..မိမိတို့ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်ကြောင့် မမောက်မာသင့်၊ ထိုစည်းစိမ် တို့ ၏စစ်မှန်သောလာရာလမ်းအားအတိအကျသိမြင် သင့်ပေသည်” ဟု ဆုံး မလေသည်…။ဘုရင်တစ်ကာတို့ ၏ ဘုရင် အရာခပ်သိမ်းအား စိုးပိုင် ဖန်ဆင်းတော်မှုသော မဟာဂရုဏာရှင်အလ္လာအသျှင်မြတ်သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အား များစွာသော နေမသ် စည်းစိမ် တို့ အားချီးမြှင့်၏ထားတော်မှု သည်..။• ကျန်းမာရေးဆိုသောစည်းစိမ်ကို ချီးမြှင့်တော်မှုခဲ့၏။သို့ ပေသော်ကျွန်ုပ်တို့ သည် ငါကျန်းမာသည် မသေနိုင် သေးဟု အလာအသျှင်သတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းအားအံတု ကာ အမိန့် ဖီဆန်ပြီး အပစ်မရှောင်နိုင်ကြ….။• ပညာဆိုသော စည်းစိမ်ကို ချီးမြှင့်ထားတော်မှုခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပညာမာန်တက် ကာ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေ ကြသည်။ ထိုပညာတတ်တို့ သည် အလ္လာအသျှင်၏ လူသားအား ဖုံးကွယ်ထားသော အကွယ်မှ ကိစ္စ ရပ်များအားသိရှိပြီး ဖြစ်သလော….။ အရှင့် အမိန့် အားဖီဆန် ပြီးထိုပညာဖြင့် သာဂျန္ဒသ်သုခဘုံ သို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါမည် လော….???• ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုသောစည်းစိမ်အား ချီးမြှင့်တော်မှုခဲ့သည်။ဖားငယ်ကဲ့သို့ သောလူသား ဖြစ်သည်..။ အလ္လာအသျှင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့်သာ ထိုစည်စိမ်တို့ အားပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရနေခြင်းဖြစ်သည်… သို့ ပေသော် ထိုလူသားသည် မင်းတို့ ကို ငါကျွေးနေတာ…ငါပေးလို့ စားနေရတာ..ငါမရှိရင်နင်တို့ ငတ်ပြီ..ငါလုပ်ချင်တာအချိန်မရွေးလုပ်လို့ ရတယ်..ငါလိုချင်တာ အချိန် မရွေးရသည် စသော …အသုံးအနှုံးတို့ ဖြင့် အလာအသျှင်အား အံတု လေသည်..။“ငါ” ဆိုသောဂုဏ်ပုဒ်မှာ အလာအသျှင်၏ ဝတ်ရုံ ဖြစ်သည်ဟု သာသနာ့ အကြီးအကဲများက အမိန့် ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ထို အသျှင့်ဝတ်ရုံအား သွားရောက် လုယူရန်မကြိုးပမ်းသင့်ပေ…။လိုချင်တာရ ..လုပ်ချင်တာဖြစ်နေခြင်းမှာလည်း ကြီးမားလှ သော ကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်ပေသည်…။နှလုံးသားထဲမှဖြစ်ပေါ်လာသော အသျှင့်ကျေးဇူးတော်များအား ဆက်ရေးမည်ဆိုလျှင်စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ် ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤ နေရာတွင် အဆုံးသတ်လိုက်ပါသည်..။“အခြေအနေတိုင်းအပေါ် အလာဟ်အသျှင်အားကျေးဇူးတင်နိုင် ခွင့်အား ချီးမြှင့်တော်မှုပါစေ…. အာမီးန်..”
Speical thanks to Brother IceRain.
Posted by Ordinary person at 11:39 PM No comments:
RABEE-AL-THANI / Al-AKHIR
The second month of spring. As with Rabee’ al-Awwal, no special rules or customs are associated with this month.
The Battle of Furu' from Buhraan took place in3AH
The Battle of Sariyyah in which the Holy Prophet (SAW) did not take part in, instead he consigned one of his Companions, Sariyyah Ali Ibn Abi Talib in the 9th Hijri as the colonel
Khwaja Nizamuddin departed from this life on the 18th of Rabi-ul-Akhir, 725 AH
Sheikh Abdul Qadir Jilanee departed from this life at the age of 90, on the 11th of Rabi-ul-akhir, 561 AH
Posted by Ordinary person at 5:03 AM No comments:
မော်လနာ ရူမီ (Turkey)
Posted by Ordinary person at 7:39 PM No comments:
တမန်တော်မြတ်သည် အစ္စလာမ်ကို တင်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့် မက္ကာဟ်မြို့သားများမှာ အလုံးအရင်းနှင့် ရန်သက္ကရု ပြုလာခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် တမန်တော်မြတ်ကို လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး ဆန့်ကျင်လာခဲ့က၏။ မည်မျှပင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများ၊ ဆင်းရဲပင်ပမ်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်ငြါးလည်း တမန်တော်မြတ်မှာ စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းမရှိခဲ့ေ
ပ။ အလံမလဲခဲ့ပေ။ နောက်ဆုံးတွင် မိမိ၏အသက်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် အစ္စလာမ် သာသနာ့အရေးအတွက် မဒီနာမြို့သို့ ထွက်ခွာပြောင်းကြွခဲ့ရရှာ၏။
တမန်တော်မြတ်ကြီးနှင့် လူထုကြီးမှာ မက္ကာဟ်မှ အတန်ငယ်ကွာလှမ်းသည့် ဟုဒိုင်ဗီယာအရပ်ကို ရောက်သည့်တိုင်အောင် မနားမနေခရီးဆက်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေသော ဟာဂျီများ၏ မျက်နှာမှာ တမဟုတ်ခြင်း လငပုတ်ဖမ်းသည့်နှယ် ညိုမဲသွားကြ၏။ မက္ကာဟ်မှ သံတမန်တစ်ဦးက တမန်တော်မြတ်ထံ ရောက်လာပြီး 'ဤနေရာမှ ရှေ့ကို တလှမ်းစာသော်မျှတိုးရန် မကြံပါနှင့်' ဤသတိပေးချက် ကို မလိုက်နာပါက မွတ်စလင်မ်များအဘို့ ဒုက္ခဆိုးနှင့် ကြုံတွေ့ရပေမည်။ မက္ကာဟ်မြို့သို့ အသင်တို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဟု ရာဇသံပေးလာခဲ့၏။ အတော်အတန်အရေးဆို တောင်းပန်သည့်အခါတွင်မှ မက္ကာဟ်သားများ က စာချုပ်တစ်ရပ် ချုပ်ဆိုရေးကို ဆွေးနွေးကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြ၏။
စာချုပ်ပါစကားများမှာ မွတ်စလင်မ်တို့ကို အကြီးအကျယ် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့သော် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က ယင်းတို့အား ဆိတ်ငြိမ်စွာနေစေခဲ့ပြီး စာချုပ်ကို ရေးသားရန် အမိန့်ပေးခဲ့၏။ ဤစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာနေရာတွင် မွတ်စလင်မ်တစ်ထောင့်လေးရာထိစုဝေးလျက်ရှိနေ၏။ အားလုံးပင် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းပြီး ရဲစွမ်း သတ္တိအပြည့်အဝရှိကြ၏။ လက်နက်စဲကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရဲသူများဖြစ်၏။ အစ္စလာမ့်ညီနောင်များအတွက် အသက်ကို ပဓာနမထားကြသူမျပင် ဖြစ်ကြ၏။ သို့သော် တမန်တော်မြတ်က ဤစာချုပ်ချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရာအစစ်အမှန်အစ္စလာမ်ကို လက်တွေ့သရုပ်သကန်ဖော်ကျူးခဲ့သည့် မဟာတမန်တော်မြတ်၏ စွန္နသ် မေတ္တာလမ်းစဉ်သည် လောကအဝှန်းကို ဆင်းရဲခပ်သိမ်း၊ ဒုက္ခခပ်သိမ်း၊ ကြောင့်ကြခပ်သိမ်းမှ အမှန်တကယ် လွတ်ငြိမ်း နိုင်ပါသည်။ ဤအချက်ကို အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒီ မဟတ္တမဂန္ဒီကြီး၊ ပြင်သစ်ဘုရင် နပိုလီယန်၊ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး အားနဒ်ရှော၊ ရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးသမားကြီး တော်လ်စတွိုင်း၊ အနောက်တိုင်း ဒဿနိကပဂေးကြီး ရပ်စဲလ်၊ သမိုင်းသုတေသီ မိုက်ကယ်အိပ်ခ်ျဟတ်စ် တို့အပြင် ခေတ်သစ်၊ ခေတ်နှောင်း၊ ခေတ်ဟောင်းတို့တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် ပညာရှင်သုတေသီ အမြောက်အမြားတို့က ဝန်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အိမ်ရှေ့မင်းသား ချားလ်စ်သည် ဤစာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးကပါပေသည်။
မေတ္တာရှင်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နှင့် ချစ်မြတ်နိုးဖွယ်ရာ ပြုမူကျင့်ဆောင်ချက်များသည် လူသားတို့အား နှစ်ဘဝချမ်းမြေ့သာယာရေးကို လက်တွေ့ ကျကျ သရုပ်ဖော်ထားပါသည်။ နှလုံးသားကိလေသာကြေးညှော်တို့မှ ကင်းစင်စေရေးမှသည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ သန္တိသုခစိုက်ရေးအထိ အလေးဂရုပြုကာ နည်းပေးလမ်းပြထား ပေသည်။
လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဘက်စုံပညာရေး၊ စူးစမ်းရှာဖွေ သုတေသနပြုရေး စသည်တို့ကို အစ္စလာမ်ဓမ္မတွင် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သလို လူသားဝါဒ ဖော်ထုတ်ရေး၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ရေး၊ လူမျိုးကြီးဝါဒနှင့် ဇာတ်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး၊ ကျွန်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ဝိသမလောဘကိုအရင်းခံသည် လက်ဝါးကြီးအုပ် ဂုတ်သွေးစုပ် စီးပွားရေးစနစ်ပပျောက်ရေး၊ သမာအာဇီဝကျသော စီးပွားရေး စနစ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထူထောင်ရေး၊ အမျိုးသမီးများဘဝမြှင့်တင်ရေး၊ လူငယ်ဘဝ စနစ်တကျ ပြုစု ပျိုးထောင်ရေး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတို့အား စောင့်ရှောက်ရေး၊ တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေး အပြည့်အဝပေးရေး၊ မွေးရပ်မြေကို ချစ်မြတ်နိုးရေး၊ အမျိုးသားရေးတာဝန်များ ကျေပွန်ရေး၊ ပြည်ထောင်အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး၊ ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရေသောက်မြစ်ဟုဆိုနိုင်သော စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကာလ ဥပဒေသတို့မှာ မြတ်တမန်တော် ကိုယ်တော်တိုင် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် လောကပါလတရား တစ်စိတ်တဒေသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့၊ ကလေးများရန်ပုံငွေ အဖွဲ့၊ မြာက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်နိုင်ငံများက အစရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများက အဓိကထား ဖ်ာဆောင်နေကြသော တရားမျှတမှု၊ လူသားချင်းစာနာမှု၊ ကလေးငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ အိမ်နီးချင်းများ အပေါ်ထားရှိရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများသည် အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ချပေးသနားတော်မူခဲ့ကာ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၌ရှင်းလင်းထားရှိပြီး တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကိုယ်တိုင်လည်း စံပြလက်တွေ့ဖော်ဆောင်လိုက်နာခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်တို့မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး၏ မေတ္တာတရားနှင့် ယှဉ်၍ ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သောချစ်စဖွယ်အပြုအမူများပင် ဖြစ်ပါသည်။
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး၏ ဘဝတစ်လျှောက် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများသည် အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များအတွက်စံပြုနမူနာယူဖွယ်၊ ချစ်မြတ်နိုးဖွယ်ရာများပင်ဖြစ်ပေသည်။
'ကြာလည်းမနှောင်း - နှောင်းလည်းဆန်းသစ်
ကဏ္ဍသစ်ကို - မြတ်ချစ်တမန်ဖွင့်ခဲ့သည် 'ဆိုသည့် ကဗျာလေးအတိုင်းပင် တမန်တော်မြတ်ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် 'ချစ်ကြည်မြတ်နိုးဖွယ်တို့တမန်တော်'ပင်ဖြစ်ပါပေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုများကို နောက်လိုက်ကောင်းများပီပီ လိုက်နာ ဖော်ထုတ်ကြပါစို့ . . . . . . ။
Posted by Ordinary person at 12:48 AM No comments:
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က ရန်သူများအား ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူခြင်း
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က မိမိအား အမျိုးမျိုးစော်ကား နှောက်ယှက်ကြ၊ ခဲနှင့်ပေါက်ကြ၊ သေကြောင်းကြံကြ၊ စစ်ပွဲအလီလီ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည့် ရန်သူတို့အလယ်တွင် အောင်နိုင်သူအဖြစ်နှင့် ရှိနေသည်။ သူတို့အား ရှင်စေသေစေဟု အာဏာကုန် အမိန့်ပေးနိုင်ချေလည်းရှိနေသည်။ သို့သော်လည်း ရန်သူကို လုံးဝ လက်တုန့်မပြန်။ အာဏာလည်း မဖက်ခဲ့။ ပြစ်ဒဏ်လည်းမစွက်ခဲ့။ 'လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရာ ရသူများအဖြစ်နှင့် သွားကြ'ဟူသော စကားတစ်ခွန်းတည်းနှင့် မေတ္တာထား တုန့်ပြန်ပြခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် လူသားအားလုံးကို ချစ်ကြည်စုံမက်တော်မူခြင်းကြော
င့် မည်သူ့အပေါ် တွင်မျှ အမုန်းမပွားခဲ့။ သို့သော် လူတို့အနေနှင့် ထိန်းကွပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော အရာအချို့ကမူ အမှန်ပင်ရှိနေသည်။ တမန်တ်ာမြတ် (ဆွ)အပေါ် အပြစ်ရှာသည်ကား တကယ်တော့ မိမိကိုယ်ကိုသာလျှင် မတော်မတရားပြုရာရောက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငါးပုံတစ်ပုံသော သုံ့လက်ရပစ္စည်းများမှာ တမန်တော်မြတ် စိတ်ကြိုက်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူ့အတွက်ဟူ၍ ချန်ထားခဲ့သည့် ရသမျှဝေစုထဲက အများဆုံးကို မိမိအား တစ်ချိန်က အသက်ကို လုပ်ကြံရန်အထိ အကြံပက်စက်ခဲ့ဖူးသည့် ရန်သူကြီးများ၏ မေတ္တာကို ရအံ့စိမ့်သောငှာ အကုန်ပုံအောပြီး ပေးတော်မူခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်အနေနှင့် တစ်ချိန်က မက္ကာသား ရန်သူကြီးများအား သူတို့လိုလားနေကြသည့်အတိုင်း မိမိဘက်က သူတို့ဘက်ကို ချီးမြှင့်နိုင် သမျှကို ခွဲဝေပေးတော်မူခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် တစ်ရက်တာ မက္ကာမြို့တော်တွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်းဝယ် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြီးစီးသွားခဲ့သည်။ နံနက်မိုးလင်းချိန်တွင် ကအ်ဗာ၏ကျောင်းတော်ဝန်းကျင်၌ ခူဇာတို့က ဟုဒိုလ်မျိုးနွယ်မှ ရုပ်ထုကိုးကွယ်သူ တစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို တမန်တော်မြတ်မှာ သတင်းကြားခဲ့သည်။ ဤတွင်အမြတ်တော်ရှတော်မူသဖြင့် လူထုကြီးအား မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်က အသက်ဖိုး လျော်ကြေးကို ပေးခဲ့သည်။ အသတ်ခံရသူကား ဒိဋ္ဌိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိမိ၏မဟာမိတ်များအပေါ်တွင် မညှာစတမ်း တမန်တော်မြတ်က ဤသို့အပြစ်ဒဏ်ခပ်ခဲ့ခြင်းကို မက္ကာသားတို့က အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြရသည် သူ၏တရားမျှတမှု စိတ်ရင်းကောင်းရှိမှုနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကြီးမှုကိုကြည့်ပြီး အစုလိုက် အအုံလိုက် အစ္စလာမ်ကို လက်ခံလာခဲ့ ကြသည်။ မိန်းမရိုင်းကြီး ဟင်းဒ်သည်ပင် မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူတစ်ယောက်သည် မိမိကိုယ်တိုင် ဒုက္ခမဖြစ်ဖူးပါက သူတစ်ပါး ဒုက္ခကိုလည်း မသိတတ်ပေ။ စိတ်ဓါတ်လည်း မပျော့ပျောင်းပေ။ စာနာ ထောက်ထားမှုကို မသိပေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်မြတ်အား ကမ္ဘာ့ကရုဏာရှင် အဖြစ်နှင့် စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်မြတ်အား ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများကို သနားကြင်နာထောက်ထား စာနာတတ်တော်မူစေရန် ကလေးဘဝမှာပင် မိတဆိုး၊ ဖတဆိုး ဖြစ်စေ တော်မူခဲ့သည်။ ဒုက္ခဆင်းရဲမှု အမျိုးမျိုးနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်စေတော်မူခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ကမ္ဘာ့ကရုဏာရှင် ပီပီ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အားလုံးတို့အား ကြင်နာစာနာတော်မူသည်။ မိတဆိုး ဖတဆိုးကလေးများကို အလွန် သနားတော် မူသည်။ ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသားများကို အလွန်ကိုယ်ချင်းစာနာတော်မူသည်။ သူတစ်ပါး၏ဒုက္ခကို မိမိဒုက္ခသဖွယ် ထင်မှတ်တော်မူသည်။ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစုတော်မူသည်။
Posted by Ordinary person at 2:01 AM No comments:
ယင်းသို့ ခေတ်စံနစ်နှင့် ယုံကြည်မှုတို့သည် ကြီးစွာမှားယွင်းတိမ်းချော်
နေသည်ကို သိမြင်နားလည်သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်ကြီး မဟာတမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် အမိုက်မှောင်ကမ္ဘာကို တော်လှန်ပြောင်းလဲပစ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းပြုလာပေ၏။ ခေတ်ဆိုး၊ စံနစ်ဆိုးနှင့် လူဆိုးကြီးများကို ဖယ်ရှား၍ ခေတ်သစ်၊ စံနစ်သစ်၊ ယုံကြည်မှုအသစ်၊ လူသစ်များကို ဖန်တီးရန် ကြံစည်အားထုတ်လာခဲ့ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သက်တော်(၄၀) အရွယ်တွင် အောက်လ္လာဟို့အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်မြတ်အား လူသားတို့၏ နောက်ဆုံးတမန်တော်ဘွဲ့ကိုအပ်နှင်း၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဝဟီများ(ဗျာဒိတ်များ)ကို တဆင့် ဖြန့်ဝေစေတော်မူခဲ့လေသည်။
တစ်နေ့သောအခါ တမန်တော်မြတ်သည် ဟီရာလိုဏ်ဂူတွင် တရားအားထုတ်နေစဉ် ကောင်းကင်တမန် ဂျီဗရာအီလ်ရောက်ရှိလာပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အောက်ပါမုက္ခပါဋ္ဌ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်တော် မူပါမည့်အကြောင်း လျှောက်ထားပန်ကြားလေတော့သည်။
'မိမိအား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် အသင်ဖတ်ပါလေ။ ထိုအရှင်မြတ်သည် (ကမ္ဘာအဝှမ်းကို)ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် လူသားအား သွေးခဲတစ်ခုဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အသင်ဖတ်ပါလေ။ အသင့်အား ဖန်ဆင်း မွေးမြူတော်မူသော အရှင်သည် အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တော်မူ၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် ကလောင်ဖြင့် သင်ကြားပေးတော်မူ၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် လူသားအား ထိုလူသား မပြုသော အရာများကို သင်ကြားပေးတော်မူ၏။' (ကုရ်အာန် ၉၆း၁-၅)
အထက်ပါ ဒေသနာတော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှ တမန်တော်မြတ်ထံသို့ ဦးစွာပထမ ကျရောက်လာ ခဲ့သော မုက္ခပါဋ္ဌ်တော်ဖြစ်၏။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ စံပြဘဝ
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ကွယ်လွန်ချိန်ထိတိုင် စံပြဘဝဖြင့် လက်တွေ့နေထိုင်သွားခဲ့သည်။ စည်းစိမ်မခံ၊ အခွင့်ထူးမခံ၊ ကုရ်အာန်ကိုလက်ခံခြင်း၊ ပို့ချခြင်း၊ နှုတ်တိုက်ချပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲသားများနှင့် ခရီးသွားများကို လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မမာမကျန်းဖြစ်နေသူများနှင့် ချိနဲ့သူများထံ သွားရောက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မွတ်စလင်ဟုတ်သူကိုဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သူကိုဖြစ်စေ ကောင်းကျိုးဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏အုပ်စုဝင်များ ကို နှုတ်အားဖြင့် ဆဲဆိုတိုက်ခိုက်လာခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဓားလှံလေးမြားအားဖြင့်လည်းကောင်း အစဉ်တဆက် ရန်ပြုလာချက်များကိုလည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်။
ရှေးယခင်က လုံးဝမရှိခဲ့သည့် ဘာသာရေးကို ထိပ်တန်းထား အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကို အောင်မြင်စွာ အခိုင်အမာ စီမံတည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ မည်သည့်လူသားတစ်ဦးအနေနှင့်မျှ ဤသို့ မစွမ်းနိုင်ရာ။ သို့သော် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ အင်ပါယာကြီးကမူ သန်းပေါင်း ရာပေါင်းများစွာသော လူသားတို့၏ နှလုံးသားများအပေါ် ဩဇာဝင့်ဆဲ စိုးမိုးလျက်ပင်။ ကုရ်အာန်၏ ဥပဒေများကလည်း တမန်တော်မြတ် ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း (၁၄၀ဝ)ကြာသည့် ယနေ့ကာလ အထိတိုင်ပင် အစွမ်းအထက်ဆုံး အကြောင်းခများအဖြစ် တည်ရှိနေပေသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) က စစ်တလင်းတွင် မိမိ၏နောက်လိုက်များကို ခင်းကျင်းနေရာယူ စီစဉ်ပေးတော် မူသည်။ အင်အားက နည်းလွန်းရုံမက လက်နက်အင်အားကလည်း အင်မတန်မှပင် ချို့တဲ့လွန်းနေခြင်းကိုမြင်ပြီး တမန်တ်ာမြတ်ခမျာ စိတ်နှလုံးပူပန်နွမ်းလျမဆုံးဖြစ်နေမိရှာသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ကအ်ဗာဘက်လှည့်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်၏ရှေ့တော်ဝယ် ဦးချလျက်ရှိနေရှာသည်။ မိမိနောက်လိုက်များ၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူလှည့်ပါ။ မိမိအတွက် အရှင်၏ကတိတော်ကို အမှန်ပင်ပြည့်ဝစေတော်မူလှည့်ပါ။ မိမိအား ကူညီထောက်ပံ့တော်မူ လှည့်ပါဟု ဆုပန်မဆုံး ရှိနေခဲ့သည်။ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလျှင် တတ်စွမ်း နိုင်သည့် ကျိုးနွံမှုမျိုးဖြင့် ကျိုးနွံလျက် မြေတွင် ဦးချပြီး ငိုကြွေးမပျက်ရှိနေတော်မူရှာသည်။ 'အရည်အတွက် အရရော အင်အားအရရော လုံးဝ အားရစရာမရှိလေပြီ။ အရှင်၏ အကူအညီတော်သာ လျှင် ကယ်တင်အားထားရာ ရှိပေတော့သည်'ဟု မြည်တမ်းလျက်ရှိရှာသည်။ မြတ်တမန်ကား တဒင်္ဂတာမျှ မှေးကနဲဖြစ်သွားခိုက်မှာပင် မိမိ၏ ဆုတောင်းပြည့်မည့်အကြောင်း အလ္လာဟ်အရှင်ဘက်က အဖြေကို ရရှိခဲ့ရှာသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ဝတ်ပြုရာက ထတော်မူခဲ့ပြီး ရင်ဝယ်ပီတိအဟုန်က သိမ့်သိမ့်တုန်လျက် မိမိ၏ အမျိုးသားထုထံ ကြွလှမ်းလာပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရေးအတွက် အားပေးစကားဆိုခဲ့ရှာသည်။ လူထုကြီးကား စိတ်ဓါတ် အဟုန် အမြင့်ဆုံးထိတိုင်ထွက် သွားခဲ့ကြပြီး မိမိတို့မျက်စိရှေ့ဝယ် ဂျန္နသ်သုခဘုံကို မြင်ယောင်လျက် ရှိနေကြသည်။ တမန်တော်မြတ်က တိုက်ပွဲဝင်လော့ဟု နှိုးဆော်ခဲ့လေပြီ ယုံကြည်သူတို့ကား တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားကြပြီး သူတို့ကား အသက်ရှင်နေရစ်ရန် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းမဟုတ်၊ အသေခံရန် တိုက်ပွဲဝင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြလေသည်။
မွတ်စလင်မ်တို့က မဒီနာမြို့သို့ သုံ့ပန်းများထက် တစ်ရက်အလျှင်စောပြီး ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ နောက်နေ့တွင် အကျဉ်းသားများ ရောက်လာခဲ့ကြရာ၌ ကြင်ယာတော် စောင်ဒဟ်သခင်မမှာ အဗူ ယဇီဒ်ဆုဟိုင်လ်ကိုမြင်ခဲ့ရသည်။ သူမက သူ့ကိုမြင်သည်တွင် 'အို - အဗူယဇီဒ် အရှုံးပေးအညံ့ခံလိုက်ပြီလား၊ လက်ပေးအောက်ချခံလိုက်ပြီလား။ ဒီလိုအညံ့ခံတာထက်စာရင် သေရတာက ပိုမြတ်သေးတယ်'ဟု ပြောချလိုက်သည်။ ဤသို့ သရော်ပြောလိုက်ခြင်းသည် သုံ့ပန်းကို လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားခြင်းကို မမြင်မိဘဲ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိကြင်ရာတော်၏ နှုတ်မှ ဤသို့ပြောဆိုသံကို အိမ်တော်တွင်ရှိနေသည့် တမန်တော်မြတ်က ကြားသိသွားခဲ့သည်တွင် 'အို - နှမတော် စောင်ဒဟ်၊ ရှင်မက သူ့အား အလ္လာဟ်အရှင်၏ တမန်တော်ကြီးကို ဆန့်ကျင်ဖို့ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်နေခြင်းလား' ဟုမေးလာသည်။ ကြင်ယာတော်က 'အို - အလ္လာဟ်၏တမန်တော် အသင့်အား သစ္စာတရားနှင့်အတူ စေတော်မူသော အရှင့်ကို တိုင်တည်ပါ၏။ သူတို့ကို ဤအခြေအနေမျိုးနှင့်တွေ့ရသည်တွင် ကျွန်မစိတ်က မပြောဘဲမနေနိုင်၍ ဖြစ်ရပါသည်'ဟု ပြန်လည် လျှောက်ထားတော်မူခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်က ထိုစဉ်ကရှိနေသည့် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိပုံကို ထင်ဟပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စောင်ဒဟ် သခင်မမှာ အကျဉ်းသားများအပေါ် သနားကရုဏာမရှိ၍ကားမဟုတ်ချေ။ တမန်တော်မြတ် ကိုယ်တော်တိုင်လည်း သုံ့ပန်းများအပေါ် စာနာမှုထားရှိသည်။ မက္ကာသားတို့ဘက်ကလာပြီး မရွေးမချင်း သို့တည်းမဟုတ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက် သူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာ မကျရောက်မချင်း မွတ်စလင်မ်တို့အနေနှင့် ဤသုံ့ပန်းများကို လုံးဝသိမ်မွေ့ နူးညံ့စွာ သဘောထားကြီးစွာဖြင့် ဆက်ဆံခြင်းပြုကြဟု မိန့်ဆိုအပ်နှံတော် မူခဲ့သည်။
Posted by Ordinary person at 12:03 AM No comments:
ကျေးဇူးတော်အစုံ ဂုဏ်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံ၍ မပြတ်မစဲ သနားကြင်နာတော်မူသော
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါ၏။
“အို - ငါအရှင်၏အချစ်တော် တမန်တော်မြတ်၊ ငါအရှင်သည် မောင်မင်းအား အကြောင်းမဲ့ စေလွှတ်တော်မူသည် မဟုတ်။ စေလွှတ်တော်မူခြင်းအလိုကား (အားလမီးန်) စကြ၀ဠာတစ်ခုလုံး ရဟမသ် ဂရုဏာတော်များ ရရှိစေရန်တည်း။” (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂၁း၁၀၇)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် တစ်စောင်လုံးတွင် ‘ရဟမသ်’ဟူသောစကားသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိမိ၏ ဂုဏ်တော်ကို ဖွင့်ဆိုရာ၌လည်းကောင်း၊ တမန်တော်မြတ်၏ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဖွင့်ဆိုရာ၌လည်းကောင်း သုံးစွဲထားတော် မူပါသည်။
နဗီတမန်တော်အပေါင်း တစ်သိန်းနှစ်သောင်းလေးထောင်ကျော် ပွင့်တော်မူခဲ့ရာတွင် အဘယ်နဗီတမန်တော်မျှ ‘ရဟမသ်’ဟူသောစကားနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း၊ အမွှမ်းတင်ခြင်း ပြုတော်မူသည်ကို မတွေ့ရပါ။ ‘ရဟမသ်’ဟူသောစကားသည် မေတ္တာနှင့် ကရုဏာကို အနက်ပေးပါသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် ခပ်သိမ်းကမ္ဘာအား ကရုဏာတရားနှင့် မေတ္တာတရားသက်ရောက်စေခြင်းအဖြစ်နှင့် ပွင့်ပေါ်ထွန်းစေသည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဒေသနာတော် ထောက်ရှုထောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ နဗီတမန်တော်သည် ကမ္ဘာခပ်သိမ်းအဘို့ လူ့ဘ၀လမ်းညွှန်အဖြစ်နှင့် သစ္စာတရားများကို ယူဆောင်လာခဲ့သော လူသားထုတစ်ရပ်လုံး၏ လူ့ဘ၀လမ်းညွှန် ကမ္ဘာ့ကရုဏာတော်ရှင် ‘ချစ်ကြည်မြတ်နိုးဖွယ်ရာ တမန်တော်’ဖြစ်သည်ကို ထင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကို ခရစ်သက္ကရာဇ် ၅၇၁-ခု၊ ဧပြီလ (၂၂)ရက် တနင်္လာနေ့ [၅၇၀-ခု သြဂုတ်လ (၂၀)ရက် ဟုလည်း တွေ့ရပါသည်။] (ဆင်ခုနှစ် ပထမနှစ် ရဗီအွလ်အောင်ဝလ်လ)တွင် မက္ကာမြို့၌ ဖခင် အဗ္ဗဒွလ္လာဟ်သခင်နှင့် မိခင် အာမီနာသခင်မတို့မှ မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) မဖွားမြင်မီ (၆)လအလိုတွင် ဖခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ခဲ့ကာ၊ သက်တော်(၆)နှစ်အရွယ်တွင် မိခင်ကြီးလည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ရှာသည်။ သက်တော် (၈)နှစ်အရွယ်တွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အားကိုး အားထားရသော ဘိုးတော် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့ကြောင့်
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ငယ်စဉ်ကပင် မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဘကြီးတော် အဘူတွာလစ်ဗ်၏ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံယူခဲ့ရရှာသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ငယ်စဉ်ဘဝမှာပင် ရိုးသား၏။ မိမိလုပ်အားဖြင့် မိမိဘဝရပ်တည်နိုင်မှုကို အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရ၏။ မှန်ကန်မှုကိုနှစ်သက်၏။ ကတိသစ္စာတည်ကြည်၏။ မွေးချင်းရွယ်တူမိတ်ဆွေများအား ချစ်ကြည်၏။ ခင်မင်၏။ မိမိချွေးဖြင့် ရင်းနှီးစားသောက်ခြင်းကိုသာ နှစ်သက်၏။ အမှန်တရားကို ရှာဖွေ၏။ လေ့လာ၏။ ဖြောင့်မတ်မှုကို ကျင့်သုံး၏။ ထို့ကြောင့်ပင် တမန်တော်ကို အာရဗ်အမျိုးသားများက 'အလ်အမင်း' ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်သူ၊ မှန်ကန်သူ၊ 'ဆွဒစ်က်'သစ္စာရှင်ဟု ခေါ် ကြသည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သခင်သည် သက်တော်(၂၅)နှစ်အရွယ်တွင် ဘီဘီခတီဂျာသခင်မ (ပထမဆုံး မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီး) နှင့် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြု၍ (၂၅)နှစ်တိုင်တိုင် ချစ်ခင် နှစ်သက်စွာဖြင့် ပေါင်းသင်း နေထိုင်ခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် တိုင်းပြည် လူမျိုးနှင့် ရပ်ရွာကျောင်းကန်များ၏အကျိုးကို နဗီတမန်တော်မဖြစ်မီ ကပင် ဦးဆောင်၍သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကအ်ဗာကျောင်းတော် အဆောက်အဦး၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများကို အသစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ရပ်ရွာကောင်းစားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေး၊ လူထု သက်သာချောင်ချိရေး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ ရသင့်ရထိုက်သော လူ့အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရေး၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းစနစ်ကို တိုက်ဖျက်ရေး၊ ခရီးသည် ဒုက္ခသည်များ ကယ်တင်မြှင့်တင်ရေး စသည်တို့ကို မြို့ပေါ်ရှိလူ ကြီးများနှင့် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးသည် အမိုက်မှောင်များဖုံးလွှမ်း၍ နိမ့်ကျဆိုးသွမ်းလှပေသည်။ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းစံနစ်၊ ကျေးကျွန်စံနစ် ထွန်းကားပြီး လူကိုလူလိုမမြင်။ အမျိုးသမီးများကို လုံးဝတန်ဖိုး မထား၊ မမျှတသော အနိုင်ကျင့်မှုများဖြင့် အမျိုးသမီးများပေါ် ပြုကျင့်ဆက်ဆံကြသည်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၌လည်း အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီးနေသော ထိုခေတ်၊ ထိုဒေသသည် သဘာဝမကျသော ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများဖြင့်သာ
ပြွန်းတီး နေပေတော့သည်။ ယင်းယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများသည် လူသားတို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ တရား မျှတရေးတို့ကို မည်သို့မျှ အကျိုးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲ အထက်ပါဆိုးဝါးမှုများသာ ပိုမို ကြီးထွားအားပေးနေပေတော့သည်။
Special thanks to sister Imaamah.
Posted by Ordinary person at 4:23 AM No comments:
Why I write this post is due to some non Muslim asked me that what isameaning of '' Assalamu Alaikum''.
The Obligation of giving Salam
O you who believe! Enter not houses other than your own, until you have asked permission and greeted those there in".
...But when you enter the houses, greet one another withagreeting from Allah:agreeting blessed and good...
"When you are greeted withagreeting, greet in return with what is better than it, or (at least) return it equally..."
When entering or leaving the house, one must acknowledge those inside by using the greetings of Muslims and themotto of Islam;
'' Assalamu Alaikum, warahamatullahi wabarakatul''
Now please let me share my experiences from few years ago. At my work, all of my colleague were non Muslim. Some of them were anti Islam in depth. At that time, my duty was to communicate and follow up with Embassies and Consulates from all continents. When I contacted to Embassies from Islamic countries, I started my conversation with '' Assalamu Alaikum''. When my colleague heard, they turned their face toward to me. But I continued my conversation and I thought to my self that I did nothing wrong. I showed my self that I amaMuslimah, I follow Allah's (SWT) teaching and I do respect my surrounding. Why should I shy and afraid to say '' Assalamu Alaikum''.
My colleague asked me question gently that what isameaning of '' Assalamu Alaikum''. Why did you use that words. I explained to them that the meaning is '' May the peace and blessings of Allah be upon you ''. It isapolite words. Every nation also has it's own greeting words. So from that time some non Muslim greeting me '' Assalamu Alaikum'' than I smile and return '' Wa alaikumu Salam ''. After that day, when I started my conversation with Salam to Islamic Embassies, they did not turn their face like before. They also understood and respected each other eventhough they warned me to choose rights foods for me as I amaMuslim.
Posted by Ordinary person at 12:19 AM No comments:
မော်လွတ်စ်နဗီခေါ် တမန်တော်မြတ် မုဟာမ္မတ်(ဆွ.အ.ဝ) ၏ မွေးနေ့
ယနေ့(ရဗီအွလ်အောင်ဝလ်လ) ၁၂-ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာ့မွတ်စ်လင်မ်အပေါင်း ချစ်ကြည်မြတ်နိုးရပါသော တမန်တော်မြတ် မုဟာမ္မတ် (ဆွ.အ.ဝ) ၏မွေးနေ့ဖြစ်သောကြောင့် ဒီပို့စ်ကိုတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 1:09 AM No comments:
မိုဟာမ္မတ်(ဆွ) အားထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဘာသာခြားများရှုတ်ချ မှုများကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း
တမန်တော်မြတ် မိုဟာမ္မတ်(ဆွ) အားကြင်ယာတော်များနှင့်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဘာသာခြားများရှုတ်ချကန့်ကွက်မှု
In defence of Islam မှကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမ္မတ် (ဆွ.အ.ဝ) ၏ လူငယ်ဘဝတစ်လျောက်လုံးတွင် ကြင်ယာတော် ခဒီဂျာ သခင်မတစ်ဦးတည်းနှင့်သာထိမ်းမြားခဲ့သည်။ လူငယ်ဘဝတွင် ယောင်္ကျားများ၏ ကာမဂုဏ် စိတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေလင့်ကစား တမန်တော်မြတ်ကား ကြင်ယာတော် တစ်ဦးတည်းကိုသာထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။
ထိုခေတ်အချိန်ကာလတွင် တမန်တော်မြတ် နေထိုင်ခဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဇနီးမိန်းမ များများယူကြခြင်းသည် သာမန်ဓလေ့ထုံးစံတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အိမ်ထောင်ကွဲခြင်းမှာလည်းအလွန်လွယ်ကူခဲ့သည်။ သို့သော်တမန်တော်မြတ်သည် ကြင်ယာတော် တစ်ဦးတည်းကိုသာထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်တမန်တော်မြတ် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သော ကြင်ယာတော်မှာ တမန်တော်မြတ်ထက်လည်းအသက်ကြီးသူဖြစ်သည်။
** ခဒီဂျာသခင်မသည် တမန်တော်မြတ်နှင့် ထိမ်းမြားချိန်၌ သက်တော် ၄၀ ရှိပြီဖြစ်သည်။ မုဆိုးမလည်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍တမန်တော်မြတ်သည် စွတ်စွဲခံရသလို တဏှာရမ္မက်ကြီးသူဆိုလျှင် တမန်တော်မြတ်၏နုပျိုနေသော သက်တော် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာ မုဆိုးမ အသက်ကြီးသူနှင့်အဘယ်ကြောင့်ထိမ်းမြားနိုင်မည်နည်း။ ဤသို့ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းသည် အမျိုးသ္မီးကိုညှာတာခြင်း၊ မုဆိုးမအား လေးစားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ **
တမန်တော်မြတ် မိုဟာမ္မတ် (ဆွ.အ.ဝ) သည် အိမ်ထောင်သက် ၂၅ နှစ်လုံးလုံး ၎င်း ကြင်ယာတော်အတွက် သစ္စာရှိသောခင်ပွန်းအဖြစ် အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းကာလမှာလည်း အခြားမည်သည့်အမျိုးသ္မီးကိုမျှ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ခဒီဂျာ သခင်မသေဆုံးသွားတဲ့အထိသစ္စာရှိ
ရှိ အတူတူနေထိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထိုအချိန်တွင် တမန်တော်မြတ် မိုဟာမ္မတ် (ဆွ.အ.ဝ)၏ သက်တော်မှာ ၅၀ ရှိပြီဖြစ်သည်။
ထိုသက်တော် ( ၅၀ ) နောက်ပိုင်းတွင် တမန်တော်မြတ်သည်အခြားကြင်ယာတော်များအား လူမှူရေး၊ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်သာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လက်ထပ်ရာမှာ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သော အမျိုးသ္မီးများအား ဂုဏ်ပြုလိုသောအကြောင်းကြောင့်၎င်း မျိုးနွယ်အုပ်စုများကို ဂုဏ်ပြုလိုသောအကြောင်းကြောင့်၎င်း ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်အစ္စလာမ် ဘာသာသည် ထိုမျိုးနွယ်အုပ်စုများတွင် တစ်နည်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်သည် ကိုရိုက်ရှ် မျိုးနွယ်မှ ကြင်ယာတော် ၆ ဦးနှင့် တစ်ခြားသော အာရဗ်မျိုးနွယ်စုများမှ ကြင်ယာတော် ၅ ဦး၊ စုစုပေါင်း ကြင်ယာတော် ၁၁ ဦးနှင့်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ အာအေရှာ သခင်မမှအပ ကျန်သောကြင်ယာတော်များမှာ မုဆိုးမနှင့်တစ်ခုလပ်များဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့အားဂုဏ်ပြုရန်ထိမ်းမြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ခေတ်ကာလတွင် ထိုကဲ့သို့သော မုဆိုးမနှင့်တစ်ခုလပ်အမျိုးသ္မီးများကိုမည်သူမှ လက်မထပ်ကြပဲ ပြစ်ပယ်ထားကြသည်။
တမန်တော်မြတ်၏ ကြင်ယာတော်များအားလုံးသည် အာအေရှာ သခင်မမှအပ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်များလည်းမဟုတ်ပါ။ လှပသောသူများလည်းမဟုတ်ပါ။ သို့ပါ၍ တမန်တော်မြတ်အား အဘယ်ကြောင့် တဏှာရမ္မက်ကြီးသူဟုစွတ်စွဲနိုင်အံ့နည်း။ တမန်တော်မြတ်သည် လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဘုရားမဟုတ်ပါ။ တမန်တော်မြတ်မှာလည်း လူသားကဲ့သို့ သားသ္မီးလိုချင်သောဆန္ဒရှိပေလိမ့်မည်။ ထိုဆန္ဒကြောင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ချင်သောဆန္ဒရှိပေလိမ့်မည်။ ခဒီဂျာသခင်မနှင့်မွေးဖွားခဲ့သော သား ၂ ဦးနှင့်သ္မီး၃ဦးသေဆုံးသွားခဲ့သည်။ အငယ်ဆုံးသ္မီးတော် ဖွာတေမာသခင်မတစ်ဦးတည်းသာ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။
ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရဥစ္စာဓနချမ်းသာကြွယ်ဝသော လူများသာလျှင် ဇနီးမိန်းမအများယူလေ့ရှိသည်။ တမန်တော်မြတ်ကဲ့သို့ ချို့တဲ့သောသူသည် လူမှူရေး၊ နိုင်ငံရေး အတွက်ရည်စူးပြီး ထိုကြင်ယာတော်များနှင့်ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်သည်၎င်း ကြင်ယာတော်များနှင့် ညီညီမျှမျှတရားမျှတစွာဖြင့်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့လေသည်။ မည်သည့်ကြင်ယာတော်ကိုမျှ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
ဒီစာအုပ်ရေးသူ Vieccia Vaglieri မေးထားသည်မှာ ဘာသာခြားများသည် တမန်တော်မြတ်အား ကြင်ယာတော်များနှင့်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ကန့်ကွက်နေကြခြင်းမှာ တမန်တော်မြတ်၏ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းရှင်းနေထိုင်ပြခဲ့သောကြောင့်လား သို့မဟုတ်ရှေးယခင်ကတမန်တော်များအကြောင်းကိုအသေအချာဂဂဏဏမသိကြခဲ့လို့ ပဲလား။
**သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးအားမုန်းတီးမှုက ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်မေ့နေကြလို့လား **
မှတ်ချက် : ရှေးယခင်မှမွတ်စ်လင်မ် မဟုတ်သောဘာသာခြားဘုရင်များမှာလည်း နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကြင်ယာတော်အမြောက်အများနှင့် ထိမ်းမြားခဲ့သည်မှာ သမိုင်းထင်ရှားတွေ့ရှိရပါသည်။
ဥပမာ : အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်မင်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ မင်းတုန်းမင်း၊ သီပေါမင်း တို့သည်ကြင်ယာတော်အမြောက်အများယူခဲ့ကြပေသည်။ ထိုဘုရင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကား တိုးတက်ရေးအတွက်
ကြိုးပမ်းသောဘုရင်များလည်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့အတူ အိန္ဒိယ၊ တရုပ်၊ ထိုင်း နိုင်ငံများတွင်လည်း ထိုနည်း၎င်း တွေ့ရှိရသည်။ လူတွင်မည်သို့ပင်အမှန်တရားကိုရှင်းပြစေကာမူ ထိုသူ၏ယင်ထဲတွင်အမုန်းရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး သူတစ်ပါးအားအပြစ်ရှာခြင်းမှရပ် ကြမည်မဟုတ်။
ရေးသားသူ Veccia Vaglieri (A famous Italian Orientalist) ၏ In defence of Islam စာအုပ်မှ ကျွန်ုပ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
တမန်တော်မြတ်၏ဩဝါဒတော်တွင်လာရှိသည်မှာ : လူတွင်အသားတုံးတစ်တုံးရှိသည်။ ကိုယ်ကောင်းလျှင် ထိုအသားတုံးသည်ဖြူမည်။ ကိုယ်ဆိုးလျှင် ထိုအသားတုံးသည်မည်းမည်။ ထိုအသားတုံးသည် နှလုံးသားပင်ဖြစ်သည်။
- The Encyclopeadia Britannica book : Mohammed was the most succefull of all religious personalities.
- Thomas Carlyle : Prophet Mohammed (PBUH) his sincerity .... Such sincerity, as we named it, has in very truth something of divine. Heros and hero book page 71.
- Mahatama Gandhi : The more I study the more I discover that the strenght of Islam does not lie in the sword. A sikh journalist in '' Nawan hindustans '' Delhi.
Posted by Ordinary person at 10:42 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 7:33 PM No comments:
၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် The true Furqan ဟူသောကုရ်အာန်ကျမ်းအတု ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Omega 2001 နှင့် Wine pree ပုံနှိပ်တိုက် Companies တို့သည် ထို The true Furqan ဟူသောကျမ်းကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာတွင်ပါဝင်ပတ်
သက် ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းကုရ်အာန်ကျမ်းအတုကို Kuwait တွင်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါသည်။ ထို ကျမ်း စာအုပ် ကို 'The 21st Century Quran'! ဟုလည်းအမည်ပေးထားသည်။
ထို ကျမ်း စာအုပ် တွင် ၃၆၆ စာမျက်နှာရှိပြီး အာရဗီဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်ရေးသားထားပါသည်။ ထို ကျမ်း စာအုပ်များကို Kuwait မှ ပုဂ္ဂလိကပိုင်စာသင်ကျောင်းများရှိခလေးများကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီး
ဖြစ်သည်။ ကျမ်း စာအုပ် အတုတွင် Al-Fatiha, Al-Jana and Al-Injil အပြင် ၇၇ စူရာဟ်ပါဝင်သည်။ စူရာဟ်၏အစတွင် ဗစ်မိစ်လ္လာဟ် နှင့်စရမည့်အစား ခရစ်ယာန်ဘာသာမှယုံကြည်မှူ three spirits များကိုပေါင်းစည်းဖော်ပြထားသည်။ The true Furqan ကျမ်း စာအုပ်သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမှဖော်ပြထားသော အစ္စလာမ်သာသနာနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်။ ထိုကျမ်း စာအုပ် အတုတွင် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အားတိုက်ခိုက် ရေးသားခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ကွာရှင်းမှူကိုခွင့်မပြုခြင်း ၊ ဂျီဟာဒ်ကို ဟာရာမ်ဟုသတ်မှတ်ထားခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ၃ ဒေါ်လာနှင့်လည်းရောင်းချသည်။ ထိုစာအုပ်ရေးသားသူသည်ခရစ်ယာန် သာသနာပြု မှ Anis Shorrosh အမည်ရှိ သူ ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ၌၎င်းသည် အကျဉ်းချခံထားရပါသည်။
ရှေ့ခေတ်ကာလမှ၎င်း ယခုကာလတွင်၎င်း အစ္စလာမ်သာသနာအားမလိုတမာမုန်းတီးသူများသည် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်ကို အတုရေးသားခြင်း၊ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမ္မတ် (ဆွ) ၏သမိုင်းကို လုပ်ကြံစော်ကား ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို စာဖတ်သူများအထူးသတိပြုကြပါရန် သတိပေးအပ်ပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 2:20 AM No comments:
အခုတစ်လော ကွန်ပျူတာတိုင်း လို လို တွင်ပျံနှံ့ နေ သောကျနော် တို့ သာသနာကို စော်ကား
ထားသောစာတစ်ဆောင် ကိုကျနော် အပါအဝင် ကျနော်နှင့် အတူနေသော ဘာသာခြားသူငယ်ချင်းများ၏ ကွန်ပျူတာ များသို့သူ့ တို့ ဘာသာခြားအချင်းချင်း၏ forward mail များမှနေ၍ ရရှိကြပါ
သည်။ ကျနော်နှင့်သူတို့ အရမ်းခင်မင်ကြပါတယ်...။
သူတို့ ကြားထဲမှာပဲ ကျနော့ နမာဇ်ကို ကျနော် ရအောင် ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နမာဇ်ရဲ့အကူအညီကြောင့် အလိုလို သူတို့ ရဲ့ရိုသေမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်အရှေ့မှာ ဘာသာရေးအကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောတဲ့ ၃နှစ်လောက်အတူ နေခဲ့တဲ့သူတွေ အဲဒီမေးလ်ရပြီးနောက်ကျနော်မရှိတဲ့ အချိန် အဲဒီမေးလ်မှ အစ္စလာမ်ကောင်လေး၏ ခေါင်းဖြတ်နေပုံ ကိုဝိုင်းကြည့် နေတဲ့အချိန်ကျနော်က ပြန်အရောက်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် အဲဒီမှာပဲ ကျနော်ကိုမေးခွန်းဝိုင်းထုတ်ကြ တာပါပဲဗျာ။ တကယ်အကြမ်းဖက်ဆိုတာအခုမှပဲလက်တွေ့ တွေ့ တော့တယ်ဗျာတဲ့..။
ကြက်ကလေးငှက်ကလေးသတ် သလို ပါပဲတဲ့ ခင်ဗျားတို့ သာသနာကအဲဒီလို ပဲပြောထားလုပ်ခိုင်းထား သလားတဲ့ ..၊
အဲဒီမှာပဲကျနော်သူတို့ ကို ရာဇဝင်ပြန်လှန်ပြရတော့တာပဲ ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ ကို ကျနော်တစ်ခု မေးချင်တယ်ဗျာ.. ၁၉၈၈ မြန်မာနိုင်ငံအရေးအခင်းတုန်းက စစ်သားကို ကျောင်းသားဘက်က မိတာတို့ ၊ စစ်ဘက်က သူသျှိုမိတာတို့ ကို ခင်ဗျားတို့ ဘာသာဝင်အချင်းချင်းခေါင်းဖြတ်ခဲ့ကြတယ် ဒါက နံပါတ်(၁) ၊တကယ့် သူသျို အစစ်တွေပါသလို အပြစ်မဲ့သူတွေလဲပါတယ်၊ဘာသာခြားတွေလဲပါခဲ့တယ်။ ဘာလို့ ဖြတ်တာလဲ...စစ်သားတွေက ပစ်သတ်လို့ တော့မပြောပါနဲ့ ...ဒါဆိုစစ်သားတွေက ပစ်သတ်တာပဲရှိတယ် ..အစ္စလာမ်ပိုင်အိမ်တွေကို ဘူထူဇာနဲ့ ထိုးသလို ကလေးငယ်လေးကို ပစ်သတ်ပြီး အလောင်းကို မိဘမောင်နှမ ကထွက်ကောက်ဖို့အိမ်ပြင်ထွက်တာနဲ့သေနတ်နဲ့ 
လှမ်းပစ် ပြီးအိမ်ထဲကနေ သမီးငယ်လေးအလောင်း ကို ကြည့်နေရတဲ့မိဘရဲ့နှလုံးသား မခံနိုင်လို့ ထွက်ကောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ သားလေးကို အဲဒီမိဘအရှေ့မှာပစ်သတ်ခဲ့တယ်။ ဒါဆို မြန်မာစစ်သားတွေကတည်ငြိမ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ပစ်တာက တော်သေးတာပေါ့ ။အဲဒါကို စစ်ဘက်ကသူသျှိုဆိုပြီး မိန်းမတွေကို ပါခေါင်းဖြတ်ခဲ့တာလဲရှိခဲ့ဖူးတာပဲ ။ အစ္စလာမ်ကကောမိန်းမတွေကိုခေါင်းဖြတ်တာမြင်ဖူးလား။ အဖြတ်ခံရတဲ့သူကရောဘာလို့ အဖြတ်ခံရတာလဲစဉ်းစားမိရဲ့လား။
အဲဒါကနိုင်ငံရေးဆို ဘာသာရေးပြောမယ်... တောင်ငူမှာ ဗလီတွေကို ဖျက်လမ်းခင်း ၊ ဗိုက်ကြီးသည်ကို ကအစအလွတ်မပေး မီးရှို့ သတ်ခဲ့တာတို့ က ဗုဒ္ဒဘာသာက ပြောထားတာလား လို့ ကျနော်ပြန်မေးခွန်းထုတ်တော့ အားလုံး ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ဘာသာရေးကို ရောမကြိတ်ပါနဲ့နာကျဉ်းမူတွေကြောင့်သာလုပ်နေ ရတာပါ။
အခုနကသားသမီးကို့ ရှေ့မှာသတ်ပြီး မြေမြှပ်ခွင့်မရတဲ့ မိဘမျိုးက အဲဒီပစ်သတ်သူကို တွေ့ ရင် ကတော့ရမှာ
လား အဲဒီမိဘနေရာမှာခင်ဗျားတို့ ဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ.. လို့ ကျနော်ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဆုံးမှာ သူတို့ အားလုံးက ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ ဒါဘာသာရေးမှမဟုတ်တာ နာကျဉ်းမူပဲဆိုတာ အမြင်မှန်ရပြီး ဖဂျရ်ကျနော်အိပ်ပျော်ရင်လာနိုးပေးနေ ကြအတိုင်းလာနိုးကြပါတော့တယ်ခင်ဗျား။ ကျနော်အဓိကဆိုလို ချင်တာက ဘာသာရေးကို သူတို့ ရောပြီးအထင်မှားမခံ အမြင်မခံဖို့ ပါပဲ။ ဒါလေးကိုပြန်မျှလိုက်ရတာကလည်းကျနော်ညီကိုမောင်နှမများအနေနဲ့ ဒီလိုမဖြေရှင်းသင့်ဖူး..၊ဒီလိုလေးရှင်းပြ
မှမှန်မယ်..ဆိုတဲ့ ကျနော့်အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြ ပြီးဘာသာခြားတွေရဲ့ အစ္စလာမ် ပေါ်မှာမြင်လာတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ ပါပဲ။
"အလ္လာအသျှင်အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ဂုဏ်ကိုဘာသာခြား၏ နိမ့်ချခြင်းမှ ထိမ်းသိမ်းတော်မူပါစေ...။"(အာမီးန်)
Special thanks to brother Ice Rain.
Posted by Ordinary person at 4:48 PM No comments:
This is the most significant month in Islamic history, marking not only the birth of The Holy Prophet (SAW) but also his passing from this world 63 years later, both events occurring on the 12th day of the month. Had there been room in Islamic teachings for the celebration of birthdays and anniversaries, these events would have undoubtedly been observed. Therefore, celebrations such as Eid Miaad an-Nabi (celebrating the birthday of the Holy Prophet (SAW)) is pure innovation. Rabee’ al-Awwal is also the month in which The Holy Prophet (SAW) migrated from Makkah to Madina.
The Holy Prophet (SAW) was born in this month as mercy for all and departed from this world 63 years later
The Holy Prophet (SAW) migrated from Makkah to Madina
Battle of Buwaat took place in the year2AH
Battle of Saf'vaan took place in the year2AH
Abu Bakr's (RA) daughter, Asma (RA) was born6years before Prophecy
Ruqayyah (RA) the daughter of the beloved Prophet (SAW) was born7years before Prophecy
Abu Bakr (RA) was appointed Caliph
Umm Kuithum was married in this month to the third Caliph Uthman (RA) in3AH
Zainab (RA), the wife of the Holy Prophet (SAW) passed away in the year4AH
Prophet (SAW) passed away in the year 10 AH
Today is Rabee-ul-awwal 4, 1430 H. (Sunday 1 Mar, 2009)
Posted by Ordinary person at 1:32 PM No comments: